ॐ/ॐ लेखी भेटी सोरुप १-१ शेर गरि पाथीभरा माताको दर्नन गरि तपाइकाे आजको राशी अनुसारकाे भाग्यफल पूरा पढ्नु होस । - Masti Khabar
[ November 17, 2019 ] उठ्ने बित्तिकै मनकामनाको दर्शन सँगै आजको भाग्य रेखा राशिफल पढ्नुहोस, र भेटी स्वरूप १ शेयर गर्नुहोस	राशिफल
[ November 16, 2019 ] भर्खरै आयो खुशीको खबर ! भारतलाई ठूलो झ’ड्का, सर्वोच्च अदा’लतले दियो यस्तो आदेश	भिडियो
[ November 16, 2019 ] कालापानी बारे सरकारले एक्सन नलिएपछि प्रचण्डको गर्जन ! यत्रो दिन भो किन दुख्दैन ??	भिडियो
[ November 15, 2019 ] फेरी नेपालको हातमा यति ठूलो सबुत। भारतलाई नेपाली भूमि छाड्नै पर्ने बाध्यता।	भिडियो
[ November 15, 2019 ] सिमाना रक्षागर्न भारतलाई चुनौती दिने हतियार बनाउन सक्छु ||	भिडियो
Homeराशिफलॐ/ॐ लेखी भेटी सोरुप १-१ शेर गरि पाथीभरा माताको दर्नन गरि तपाइकाे आजको राशी अनुसारकाे भाग्यफल पूरा पढ्नु होस ।
April 29, 2019 राशिफल
वि.सं.२०७६ साल वैशाख १५ गते । आईतबार । ईश्वी सन् २०१९ अप्रिल २८ तारिख । नेपाल संवत् ११३९ । परिधावी संवत्सर । उत्तरायण । वसन्त ऋतु । श्रीशाके १९४० । वैशाख कृष्ण पक्ष । तिथि नवमी,३५ घडी ५५ पला,बेलुकी ०७ बजेर ५२ मिनेट उप्रान्त दशमी । करण तैतिल,बिहान ०६ बजेर ५२ मिनेट उप्रान्त गर,बेलुकी ०७ बजेर ५२ मिनेट उप्रान्त वणिज । नक्षत्र धनिष्ठा,अहोरात्र । योग शुक्ल,५६ घडि २७ पला,रातको ०४ बजेर ०४ मिनेट उप्रान्त ब्रम्ह ।आनन्दादिमा मातंग योग । चन्द्रराशि मकर,बेलुकी ०४ बजेर १९ मिनेट उप्रान्त कुम्भ । धनिष्ठा पञ्चक बेलुकी ०४ बजेर १९ मिनेटबाट प्रारम्भ। काठमाडौंमा सूर्योदय ०५ बजेर ३० मिनेट,सूर्यास्त बेलुकी ०६ बजेर ३५ मिनेट । दिनमान ३२ घडी ४३ पला ।
पदिय दायित्व बढ्नेछ भने निर्णय क्षमताको बिकाश हुनेछ । उच्च पदस्थ ब्याक्तित्वसँग भेटघाट हुँने तथा मानसम्मान,ईज्जत,प्रतिष्ठा बडेर जानेछ । प्रशासनिक क्षेत्रमा तपाईको बर्चश्व कायम रहने छ । लामो दुरिको धार्मिक तथा शैक्षिक यात्राको प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । आत्मिय मित्र तथा शुभचिन्तकहरुको साथ पाईने हुँनाले जस्तो सुकै चुनौतिको पनि सामना गर्न सहज हुनेछ । टाडिएका मित्रहरुसँगको भेटघाटले नयाँ योजना बनाउँन महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गर्नेछ । प्रेम प्रशङमा दिन बित्ने तथा माया प्रेमको डोरो कसिलो भएर जानेछ ।
संकट ब्याबस्थापनको लागि चालिएका कदम हरु निरर्थक हुनेछन् । रुपैया पैसा लेनदेन तथा सापटि लिने दिने काम नगर्नुहोला रुपैया पैसाकै कारण साथिभाई तथा आफन्त सँग मनमुटाब बढ्नेछ । नयाँ काम गर्नुभन्दा पुरानै कामलाई निरन्तरता दिन सकिनेछ भने बैक तथा बित्तिय सस्थामा गरिएको लगानि भने फस्टाएर जानेछ । बाटो हिड्दा तथा सवारि साधन चलाउँदा ध्यान दिनुहोला कुनै पनि बेला अप्रिय घटना घट्न सक्छ । साझबाट समय राम्रो रहेकोले धार्मिक प्रतिष्ठान तथा मन्दिर तिरको यात्रामा निश्कन सकिनेछ ।
पारिवारिक माहोल तथा शुभ मांगलिक कार्यमा सहभागि भई मिष्टान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवरि प्राप्त हुनेछ । एकल तथा साझेदारि व्यावसायमा लगानि गरि प्रशस्त आम्दानि गर्न सकिनेछ भने उपलब्धिमुलक व्यावसायिक यात्रा हुनेछ । पढाई लेखाईमा थोरै समय दिदापनि प्रतिष्पर्धिहरुलाई किनारा लगाउँदै उत्कृष्ट नतिजा हात लाग्नेछ । जीवन साथिको सहयोेगले आर्थिक व्यावस्थापनका मुद्दाहरु हलगर्दै सम्बृद्धिको बाटोमा लम्कन सकिनेछ । साझबाट समय मध्ययम रहेकोले सवारि साधन चलाउँदा ध्यान दिनुहोला ।
मुद्दा मामिला तथा न्यायलयबाट हुँने निर्णयहरु तपाईकै पक्षमा हुनेछन् । वादबिवाद तथा प्रतिश्पर्धामा प्रतिश्पर्धिहरुलाई सजिलै हराउँन सकिनेछ । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जाने तथा थप लगानि गर्ने बाताबरण बनेर जानेछ । माया प्रेम तथा दाम्पत्य जिवनको गाठो झन् गसिलो भएर जानेछ । स्वास्थ्य सम्बन्धि पुराना समस्या भए समाधान भएर जानेछ । पढाई लेखाईमा सोचेजस्तै प्रगति गर्न सकिनेछ । मावलि पक्षबाट तपाईको काममा आर्थिक सहयोग हुनेछ भने अघि पछि तपाईको नराम्रा कुरा गर्नेहरु तपाईकै प्रशंसा गर्दै हिड्नेछन् ।
प्रेम प्रशङगमा रमाउँन चाहनेहरुका लागि लामो समय सँगै बसेर भावना तथा मनका कुरा साटासाट गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । आकस्मिक लाभ हुँने तथा बाधा अवरोधहरु स्वत हटेर जानेछन् भने भौतिक सम्पति तथा सवारि साधन प्राप्तिको योग रहेको छ । बौद्धिक कार्यमा सहभागि भई आफ्नो गतिलो प्रश्तुति पस्कने अवसर प्राप्त हुनेछ भने पढाई लेखाईमा राम्रो प्रगति हुनेछ । परिवार तथा सन्तान बाट तपाईले गरेको काममा सहयोग हुनेछ । शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यापार व्यावसायमा लगानि बडाउँदा राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुनेछ ।
आफन्तहरु टाडिनेछन् भने शुभचिन्तकहरुको सहयोग तथा समर्थन पाईने छैन । राजनिति तथा समाजसेवामा जनताको काम गर्दापनि आलोचनाको शिकार हुनुपर्दा मन खिन्न हुनेछ । यात्रा गर्दा वा सवारि साधनको प्रयोग गर्दा ख्याल गर्नुहोला समय मध्ययम रहेकोछ । माया प्रेममा अबिश्वास बढ्नेछ भने घर आमा सँग पनि मनमुटाब सिर्जना हुनेछ । साझपख समय राम्रो रहेकोले पढाई लेखाईमा समय तथा ध्यान दिन सके सफलता हात लाग्नेछ ।
आफ्नो रुचिको बिषयमा दिईयको समयबाट सार्थक नतिजा आउँने हुँनाले मन प्रशन्न रहनेछ । दाजुभाई,छिमेकि तथा सहयोगिहरु सँग मिलेर गरिने कुनै पनि उत्पादन मुलक क्षेत्रमा गरिएको व्यावसाय फस्टाएर जानेछ । पति पत्निबिच बिश्वासको डोरो अझ कसिलो भएर जानेछ । छोटो दुरिको व्यावसायिक तथा रमाईलो यात्राको तय गर्न सकिनेछ भने बहुप्रतिक्षित ईच्छा तथा आकांक्षाहरु पुस हुनेछन् । साझपख समय मध्ययम रहेकोले प्रेममा मनमुटाब बढ्न सक्छ ध्यान दिनुहोला ।
बिशिष्ट व्याक्तिहरु सँग भेटघाट हुने अवसर जुर्नेछ भने मिष्टान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर जुर्नेछ । टाडाबाट खुसिको समाचार सुन्न पाईनेछ । नोकरिमा बढुवा, प्रशंसा तथा पुरस्कार पाईने योग रहेकोछ । साहित्य तथा कलाकारितामा समय खर्चिने हरुले मनग्गे आम्दानि गर्ने समय रहेकोछ भने नसोचेको ठाउबाट धन आगमन हुनेछ । आफन्त तथा आत्मिय मित्रहरु सँग पुराना तथा चिसिएका सम्बन्धहरु रिनो गर्न सकिने हुदा मन प्रशन्न हुनेछ । पढाई लेखाईमा भनेजस्तो नतिजा आउने हुनाले मन प्रशन्न रहनेछ ।
मानव निर्मित भौतिक बस्तुहरुको प्रयोग गर्न पाईने हुदा मन प्रसन्न रहनेछ । पारिवारिक माहोलमा सहभागि भई मिष्टान्न भोजन ग्रहण गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । प्रतिष्पर्धिहरुलाई किनारा लगाउदै अध्ययनमा चाहेजस्तो सफलता हात पार्न सकिनेछ । नया कामको प्रस्ताब आउनेछ भने नया प्रकृतिको काम थालनि गरि मनग्गे आम्दानि गर्न सकिनेछ । व्यापार व्यावसाय फस्टाएर जानेछ भने आर्थिक रुपमा सम्पन्न भई घर परिवारका ईच्छा आकांक्षा तथा दैनिक उपभोग्य बस्तुहरुको परिपुर्ति गर्न सकिनेछ ।
अनाबस्यक ठाउँमा श्रम तथा शक्ति प्रयोग हुनेछ ध्यान दिनुहोला । आफन्त तथा घर परिवारका मानिस सँग बिवाद बढ्नेछ भने बिश्वास गरेकाहरु बाटनै धोका हुनेछ । बिद्या तथा प्रतिश्पर्धामा सहभागि भए पनि नतिजा आफुतिर ल्याउन राम्रै मेहनेत गर्नुपर्नेछ । बैदेशिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यापार व्यावसाय फस्टायर जानेछ भने बिदेशमा बसेर काम गर्नेहरुका लागि आजको दिन फलदायि रहनेछ । साझपख समय राम्रो रहेकोले भौतिक सम्पति तथा बिलाशि बस्तु प्रयोग गर्न पाईनेछ ।
सानो प्रयत्नले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिनेछ भने सानो सानो व्यावसाय गर्नेहरुले मनग्गे फाईदा कमाउन सक्नेछन् । आर्थिक अवस्था सुदृढ हुने हुनाले प्रगति पथको यात्रा तय गर्न सकिनेछ । बिभिन्न स्रोत साधनको प्रयोग गरि मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ । अध्ययन तथा अध्यापनमा थोरै मेहनेत गर्दा पनि सफलता हात लाग्नेछ । प्रेमको डोरो कसिलो भएर जानेछ भने घर परिवारमा सबैसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउन सकिनेछ । साझबाट समय मध्ययम रहेकोले अनाबश्यक काममा अल्झिने समय रहेकोछ ।
आज शनिबार साढे सातको शनिदोष हटाउन संकटा देवीलाई एक शेयर गर्दै भेटी चढाएर राशिफल पढ्नुहोस् । #संकटा_देवी
उठ्ने बित्तिकै मनकामनाको दर्शन सँगै आजको भाग्य रेखा राशिफल पढ्नुहोस, र भेटी स्वरूप १ शेयर गर्नुहोस
भर्खरै आयो खुशीको खबर ! भारतलाई ठूलो झ’ड्का, सर्वोच्च अदा’लतले दियो यस्तो आदेश
कालापानी बारे सरकारले एक्सन नलिएपछि प्रचण्डको गर्जन ! यत्रो दिन भो किन दुख्दैन ??
फेरी नेपालको हातमा यति ठूलो सबुत। भारतलाई नेपाली भूमि छाड्नै पर्ने बाध्यता।
सिमाना रक्षागर्न भारतलाई चुनौती दिने हतियार बनाउन सक्छु ||
अन्तत: भारतसँगको सिमामा यसरी छिर्दै नेपाली सेना, सीमाको सर्भेअनुगमन गर्ने
कालापानी बारे बोल्यो चीन, भारतीय हस्त’क्षेप हटाउन नेपालसँग सहकार्य गर्ने !
जंगियो चिन || कालापानी लिपुलेक कसको ?? बल्ल बोल्यो चिन || हल्लियो मोदीको मुटु